ခရီးစဉ်တလျှောက် …. လက်ဆော့မိသမျှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ခရီးစဉ်တလျှောက် …. လက်ဆော့မိသမျှ
ခရီးစဉ်တလျှောက် …. လက်ဆော့မိသမျှ
Posted by etone on May 3, 2012 in My Dear Diary, Photography, Travel | 29 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း ခရီးသွားဟန်လွဲ အမှတ်တရပုံများ
ဗြိတ္တာဖြစ်မယ့် နှစ်ယောက်က ကိုဖက်ကတ် မုန့်ဟင်းခါးစားနေတာကို နှောက်ယှက်နေတဲ့ပုံပါ .. သူခမျာ စားလို့တောင် မ၀သေးဘူး ... စားတာ ရပ်လိုက်ရတယ် .. သနားထှာအေ
ဒါကတော့ မုန့်ဟင်းခါးစားပြီးတော့ .... ပြန်ထွက်ခါနီး .. လူမစုံသေးလို့ စောင့်နေကြတာပါ ... ။ စောင့်နေရင်း ထပ်စာလျှင် ပြန်ဝင်စားမယ်လို့ ကြုံးဝါးသူလည်း ရှိနေပါတယ် ... နောက်က ကားကြီး အပြည့် ရွာသူရွာသားတွေ စုပြီး သွားခဲ့တာလေ ။
ကျိုက်ထီးရိုးလေး ဘုရားပေါ့ ... ။ အလိမ်အကောက်လှေခါးလေးကနေ .. လူတက်လို့ ရတယ် ... မိန်းမတွေကတော့ .... ထိပ်တံတားဝထိပဲ တက်လို့ ရတယ်... ။
ကျိုက်ထီးရိုးလေး ဘုရားရဲ့ အနီးနားမှာပဲ ရှိတယ် ... နံမယ်တော့ မသိဘူးရယ် ။
ဘာလို့လည်း မသိဘူး ... ကားက ဆေးရုံရဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ချပေးတယ် .... မြေကြီးနဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ထိတော့ အမှတ်တရ တစ်ပုံလောက်လှမ်းရိုက်လိုက်ပါတယ် .... ဓါတ်ပုံထဲ ပြန်ကြည့်မှ ... ကားက ဆေးရုံနဲ့ ပိုနီးတဲ့နေရာမှာ ပါကင်သွားထိုးထားတာမြင်တယ် ... ..ဟီးဟီး ...
ကားပေါ်က လှူဖွယ်ပစ္စည်းတွေကို ... ကူညီသယ်ပေးနေတဲ့ပုံပါ ... ။
သူများတွေ ပစ္စည်းသယ်နေတာကို ကြောင်ကြည့်နေသူကလည်း ရှိသေးတယ် .... ဒီလိုကြည့်တော့လည်း ၀ိတ်ချဖို့ မလိုသေးဘူးပဲ ဟိဟိ
ဒီကောင်မလေးလည်း .. ကြောင်ရပ်ကြည့်နေတာ ... ဘာသယ်ရမှန်း မသိဘူးပဲ ... ဘ၀တူတွေ တွေ့ပြီ ... ဟိဟိ
ဒါကတော့ လမ်းလျှောက်လို့ ဆေးရုံနဲ့ နီးလာတဲ့ အချိန် တစ်ပုံလောက် ထပ်ဆွဲလိုက်တာပါ ... ။
ရွာခံတွေ လာကြိုနေတာပါ ... တကယ်တမ်း လာစောင့်ကြိုတဲ့ လူ ဒီထက် များပါတယ် ... ရှေ့ကလူတွေနဲ့အတူ .... ဆရာတော်ဖူးဖို့ ပါသွားကြလို့ ...
ဘယ်သွားရမလဲ မသိတော့ ..သူများတွေ သွားတဲ့နောက်ကို လိုက်ရင်း လက်ဆော့မိပြန်တယ် ... မှားတာရှိလျှင် ၀န္ဒာမိပါချင့် ဟိဟိ .. နောက်က ရိုက်ထားတာတွေဆိုတော့လေ ...
သူများတွေ ဘုန်းကြီး ရှိခိုးဖို့ ခန်းမထဲဝင်နေချိန် ၊ မယောင်မလည်နဲ့ ... အရှေ့က အခန်းကိုကြည့်တော့ .... ထမင်းစားခန်းတဲ့ ..အ ဟိ ... ရှလွှတ် ရှလွှတ် ...
တရား မနာခင် အဆင်ပြေသလို ၀င်ထိုင်ကြတယ်ပေါ့ ... ရေသောက်ပြီး ရစ်နေတဲ့ လူကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ် ...
့အလှူပြီးလို့ ပြန်ခါနီး ရုတ်စိ ရုတ်စိပေါ့ ...
ဒါကတော့ ကားမှာ ကပ်ထားတဲ့ စာတမ်းပါပဲ .. .ကိုအမတ်မင်း လှူဒါန်းတာလို့လည်း သိရပါတယ် ... ။ သာဓုပါ x3ချင့် .... :D
ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံးပါ သဂျီးရယ် .. ဂယ်ဘာ .. ဂယ်ဘာ …. ဟိဟိ
အလှူခရီးစဉ်တွင်း .. မြင်မိ ၊တွေးမိတာလေးတွေတော့ အေးဆေးမှ ဖောက်သည်ပြန်ချဦးမယ် … ။ အဲ့ဒါကတော့ .. အလှူနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလေ …. ။
ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကပုံထဲမှာအမြဲပါနေတာဆိုတော့ လက်စွမ်းပြထားတာကတော့ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ထင်ပါ့။
အစီအစဉ်တွေကလန်းတယ်နော် သွားတဲ့လူတွေကကုသိုလဲရဝမ်းလဲဝပါဘဲ ဒါနဲ့စီကားမစပ် ကီမရာ့စီရာက သွပ်ပြားပုံတွေရိုက်ရင်
ဝါးတားဝါးတားနဲ့ (ရေငတ်နေပုံရတယ်) အညစ်ပုံရိုက်ဒေါ့ ကြည်ပြတ်ရှင်းပါလား (မတူတာလေးတွေပါလား) နောက်တာပါဗျာ စိတ်
အဟဲ ..ကိုအောင်မြင်တတ်သားပဲ … ဒါက ဒီလို ရှိတယ် .. ဟိုဟာက ဟိုလိုရှိတယ် …
နောက်ဆုံးတော့ %$#@!*&^! %$#@!*&^! %$#@!*&^! ကြောင့်ပါတဲ့ချင့် .. ဟိဟိ
ရွာက လူတွေက ငှက်ပျောသီးအခိုင်တွေ မနည်းဘူး အပြန် လက်ဆောင် ထည့်ပေးဖို့ စုထားကြတယ်။
ပိန္နဲသီးတွေ လည်း ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီး အစိမ်းခိုင်တွေကို အတင်းထည့်ပေးပေမဲ့ လာတဲ့ လူတွေက တယောက်စီ တယောက်စီ ဖြစ်နေလို့ ခွဲပေးဖို့ ခက်လို့ အပြန်မှာ ရန်မဖြစ်ရအောင် မယူတော့ဘူးနော်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီက ကလေးတွေကိုပဲ ခွဲကျွေးလိုက်ပါ ဆိုပြီး သူတို့ လက်ဆောင်ကို မယူပဲ ပြန်ထားခဲ့ရတယ်။
အမလေး မဆူးရယ် ရန်ဖြစ်မှာစိုးရတယ်လို. သများတို.များ နို.စို.ကလေး ပေါက်စနလေးတွေကျနေတာပဲဟယ်…
ယူခဲ့ပါတော့လား… ပိန္နဲသီး သိပ်ကြိုက်တာ… ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခွဲဝေယူမှာပေါ့အေ ညည်းနှယ့်….. နောက်တစ်ခေါက် ပြန်သွားသယ်ကြမလား.. ဟဟဟဟဟ :D
အယ်.. ရွာက လူတွေ ထည့်ပေးလိုက်တာ ထင်တယ်.. ငှက်ပျောသီး အမှည့်တွေ မနို ခြင်းထဲမှာ အတင်း ထည့်ထားတာတွေ့တယ် ဘယ်တုန်းက ပေးလိုက်မှန်းတောင် မသိဘူး။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ ငှက်ပျောသီးက ငပျော့သီး ဘ၀ကို ပြောင်းနေပြီ။
သတင်းကြားတာတော့ မနို အိမ်လဲ ရောက်ရော အဲဒီ ငပျော့သီးက ငပြဲသီး ဘ၀ ရောက်ရော ဆိုပဲ… လမ်းမှာ သူလည်း ခုန်ပေါက်လာရတာ ဆိုတော့.. ဒဏ်ခံရလွန်းလို့ ထင်တယ်။
တရားခံတွေပြီ အဲ့ဒီ ငပျဲသီးတွေနဲ့ အအေးဘူးတွေကြောင့်
အိမ်ရောက်တော့လဲ အဲ့ဒီ ငပျဲသီးကို မပစ်ရက်လို့
ကြော်လိုက်ရတယ် ဆီတောင် အတော်ကုန်သွားတယ် :-)
ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ပြန်လာ ရွေးနိုင်ပါကြောင်း
အ၀ါရောင် တိတ် တစ်ခွေ ပိုင်ရှင်သည် အရင့်ရောင် ဖြစ်မယ် ထင်ပါသည်။
ကားနဖူးစည်း ကပ်ဖို့ တိတ် မရှိတဲ့ အတွက် သူ စိုက်ဝယ်ပြီး ကပ်လိုက်မယ် ပြောတာ ကြားမိလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ့ ငပျဲသီးတွေကို ကြော်မစားပဲ ပေါင်းလိုက်ပါလား.. ငပျဲသီး ကို အုန်းနို့လေးနဲ့ ပေါင်း ချိုချိုမွေးမွေးလေးနဲ့ ရာသီဥတု ပူပူနဲ့ စားပြီးသောက်ပြီး တရေးတမော အိပ်ယုံပဲ။
ဒါကြောင့် မရမဲ့အဆုံးတော့ ဒဲပုံလေး ရိုက်လာတယ်
သူကြီး တနားလို့ …ဟီး
တော်သေးတယ်…. သများ ချောင်းနေတဲ့ပုံတွေ မပါတာ..
အဲ့ဒီသွပ်ပြားချောင်းနေတဲ့ပုံ ချာတူးရဲ့ ဗွီဒွီယို မှတ်တမ်းထဲမှာတော့ ရှိလောက်ပါရဲ့နော် … ။
သွပ်ပြားချောင်းနေတုန်းက သွပ်ပြားတို့က တရားနာနေတာလေ ..ဟိဟိ :D
ဂီဂီ တုံးလုံးလဲပြီး ဆရာတော်ကို ရိုက်နေတဲ့ပုံမပါဘူးလား အဲဒါလည်း တင်လိုက်လေ….
ဓါတ်ပုံထဲမှာ ရုပ်သိပ်မစားဘူး။ဒီကြားထဲ ထိပ်ပြောင်နေတော့ ကိုယ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့
အင်း ရုပ် ချောတဲ့ သူတွေက ဓါတ်ပုံ ထဲမှာ မလှတတ်ဘူးတဲ့
(ကျိုက်ထီးရိုးလေး ဘုရားရဲ့ အနီးနားမှာပဲ ရှိတယ် … နံမယ်တော့ မသိဘူးရယ် ။)
အဲဒါ တာဝတိံသာ စေတီလို့ ခေါ်တယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်လေးရဲ့ ဘေးမှာ လုပ်ထားတာ ကျောက်ထပ်ကြီး၊
နောက်ဖက်မှာ ကျီးကန်းပါးစပ်လည်း ရှိသေးတယ်။
အန်တီမမက ကျီးကန်းပါးစပ်ရှိတယ် ဟိုဘက်မှာလို့ လှမ်းပြောတုန်းက နေအရမ်းပူလို့ ဆက်မသွားဖြစ်တော့တာ ။ အခုမှ ပြန်တွေးရင်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ရော မရောက်ဖူးတဲ့ အရပ်ဖြစ်လို့ သွားခဲ့မိလျှင်ကောင်းသားလို့တွေးမိပြန်တယ် ။ ရှိတဲ့နေရာလေးမှာ အကြံ ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ တည်ထားတဲ့ ဘုရားတွေပါပဲ ။ လှေခါးလေးတွေက သေးပေမယ့် သိပ်မမြင့်လို့ တော်သေးတယ် ။
ဖက်တီး ကက် ရဲ့ လက်ထဲ က ပန်းကန်လုံး လေး ကိုက သေး တာပါဟယ်။
တုံတုံ ရေ – ဘေးကနေ ဟိုလိုမ ဒီလိုသယ် လို့ ပြောပေးမဲ့ သူလဲ လိုတယ်လေ။
မနောပြောတဲ့ “ဂီဂီ တုံးလုံးလဲပြီး ဆရာတော်ကို ရိုက်နေတဲ့ပုံ” ဆိုတာဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်။
အဲလို ပက်လက်လှဲလိုက်၊ မှောက်ခုန် မှောက်လိုက်၊ ကုန်းလိုက်၊ ကွလိုက်၊ မှ မဟုတ် ရင် “ပရို” မဟုတ်ဘူး ဆိုကြတာဘဲ။
အခုတော့ “ပရို” ကြီး က ဆရာတော်ကိုတောင်မှ မရှောင်။
မမ ရေ ဗဟုသုတပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ဓာတ်ပုံလေးတွေ က ကြည့်မဝ ဘူး။
အရီးလတ် ခင်ဗျာ တရားနာနေတုန်း မျက်စိဖြတ်ခနဲအဖွင့် ၊ ဂီဂီ တုံးလုံးလှဲပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တာမြင်တော့ ရယ်ချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားရတယ် ။ သူ့အလုပ်သူလုပ်ပြီး ထွက်သွားပေမယ့် မြင်မိတဲ့ လူကတော့ ရယ်ချင်စိတ်နဲ့ ကျန်ခဲ့တယ် ။ ရယ်ချင်တယ်ဆိုတာက သဘောကျလို့ပါ ။ ဓါတ်ပုံ ပုံကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ လျှပ်တပြတ်အဆင်ပြေသလို ရိုက်ရတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်နဲ့ အနစ်နာခံမှုကို မြင်လိုက်ရလို့ ပါပဲ ။
မန့်မလို့ကို အပေါ်မှာ ရီပလိုင်းလုပ်တဲ့သူကိုကြည့်ပြီး
နာမည်မှားမှာစိုးလို့ ပို့စ်တင်သူကိုပြန်ကြည့်ရတယ် :D
စိတ်ဝင်စားတယ် .. အားကျတယ် .. အချိန်မရလို့ .. လာဖတ်သွားတယ်နော်
ဒေါ် etone ကြီးကတော့ရေဗူးလေးကိုင်ပြီး သံဝေဂရတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့…
ကိုရွှေတိုက်စိုး ရဲ့အုပ်ထိန်းသူကတော့ ကလေးကြီးပျောက်လို့ လိုက်ရှာနေတဲ့ပုံလေးနဲ့..
ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှာစိုးရတယ်မိုလို့ ..၀အောင်စား
တိုင်းမူး တို့ဆံပင်သွားကောက်တာ ဘယ်နှစ်ရက်တောင်ကြာသွားတာဒုံး :O
အားကျလို့ ဝင်ဖတ် ဝင်ကြည့်ပြီး ဝင်ပွါးလိုက်ပါတယ်…
အားကျစရာ အတိပါ … ပျော်စရာကြီးနော်…
နောက်ထပ်တခါ ဆိုရင် ဒို့လဲ လိုက်မယ် ချန်မထားနဲ့….။
ကျိုက်ထီးရိုးလေး ဘုရားရဲ့ အနီးနားက နံမယ် မသိတဲ့ ဘုရားပုံလေးကြိုက်၏
စေတီရှေ့ကအဆောက်အဦးက (အာရုဏ်ခံလားမသိ) အတွန့်အတက်တွေပါဘူးနော် ????
မမအိတို့ရက်စက်တယ် ချစ်ညီမလေးမလိုက်ရလို့ ဒီပို့စ်တွေဖတ်ရင်ငိုချင်တယ်နော် ။။